Posted by tarzan88 at 22:260comments | Read more...
ပြည်သူလို့ခေါ်တဲ့ဒေသခံလယ်သမားတွေ သာလျှင်ခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရမယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုစခဲ့
ကတည်းက၊ လယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့ခြင်းကစတင်ပြီး၊ ၎င်းအသိမ်းခံလယ်မြေတွေအတွက်(၃)
နှစ်စာ သီးနှံကြေးဘဲ ပေးထားတာကို၊ လက်ဝါးကြီးအုပ် ဂုတ်သွေးစုပ်လိုသူတွေက၊ စာချုပ်ပေါ်မှာ၎င်းတို့လို
ချင်တဲ့ပုံစံကို ဖန်တီးပြီးလူလည်ကျထားတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ၊ မူလအရင်းခံပြသနာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေဟာအာဏာရှင် အတင်းအဓမ္မအုပ်ချုပ်သူတွေလုပ်သမျှကို၊ ခံနေရတဲ့ဘက်ကဘဲ ရှိနေခဲ့ရတာ
ဟာ ရာစုနှစ်တဝက်ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတာ၊ ကမ္ဘာကသိသလို၊ လတ်တလောအာဏာရှင်တဖြစ်လဲဆိုတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတယ်။ ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသံကောင်းဟ
စ်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့်၊ လူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကို ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလျှင်၊ ယခင်ကအခြေအနေများ
နဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းလူထုဟာ၊ ၎င်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကိုတော
င် မဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့အခြအနေတွေကိုရင်ဆိုင်လာရလို့၊ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ရတာပါ။ သူတို့မ
မှားပါဘူး။ လယ်သမားတွေ လုပ်ရပ်ကသိပ်မှန်ကန်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ မတရားသူများပိုင်တဲ့မြေတွေ
ကိုတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေတွေကို တရားမဲ့သိမ်းယူထားတဲ့သူတွေထံကနေပြန်
ပြည်သူတွေမှာအားကိုးစရာမရှိတာ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာသိမ်းအစိုးရတက်လာပြီးကတ
ည်းကဆိုတော့ စုံစမ်းရေးကော်မီရှင်ရဲ့ လူနည်းစုအတွက်သာအကျိုးရှိစေသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်
ရတာဟာ ယခင်ကလိုဘဲအဖိနှိပ်ခံဘဝတွေကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာပြည်
ကိုဝင်ရောက်လာနေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ လက်ဦးမှုရယူပြီး အကျိုးအမြတ် အများကြီးရလိုတဲ့တ
ရုပ် ကုမ္ပဏီတွေ အများစုဖြစ်ပြီး၊ တရုပ်တွေဟာ မြန်မာပြည်သူမပြောနဲ့သူ့ပြည်သူတွေကိုတောင် အလေး
သိပ်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာ၊ တရုပ်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု့တွေ မလုပ်တော့မှာ
ကိုစိုးရိမ် တယ်ဆိုတဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာကတော့၊ မတရားအလုပ်ခံနေရစဉ် အားကိုးရာမဲ့နေချိန်မှာမျ
၈၈ မျိုးဆက်ကိုယ်စားပြု မင်းကိုနိုင် ပြောသလို၊ အစီရင်ခံစာဟာ အစီရင်ခံစာလိုဘဲဖြစ်သင့်သည်။ ဒါပေမ
ယ့်၊ အာဏာရှင်တွေဟာ၊ သူတို့လိုလိုလားလားဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အလေ့အထ
ရှိပြီးသားဆိုတော့၊ ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုချက်ခြင်း အကောင်အထည်ဖေါ်နေတာဟာ ရယ်စရာတော့
ကောင်းလှသည်။ ဖြစ်သင့်တာက၊ ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာ ထွက်ပြီးနောက် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး အသေ
အခြာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီး၊ဒေသခံ ပြည်သတွေနဲ့အကြေအလည်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှ၊ လုပ်
ငန်းတွေကိုပြန်စတယ်ဆိုတာက အနိမ့်ဆုံးအဆင့်လုပ်သင့်တယ်။ အဖြစ်သင့်ဆုံးကတော့၊ ဒေသတွင်းမှာရှိ
တဲ့လယ်ပိုင်ရှင်များ၊ သူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိပြီး၊ အဲဒီလယ်ယာမြေတွေကိုမှီခိုပြီးတနေ့
သဘာဝအကျဆုံးဖြစ်ပေမည်။ ဒါပေမယ့်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်တွေပိ
ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဟာ၊ Government of the people, for the people, by the people ဆိုတဲ့ပြည်
သူကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ဖြစ်ပေမယ့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တရုပ်စီးပွါးရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကစစ်
မျိုးကိုအကောင်အထည်ဖေါ်နေတာလည်းဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ လယ်ယာမြေတွေကို
ကလိန်ကကျစ် လုပ်နေတာဟာလက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမှာသာမဟုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်သူ
တွေဒုက္ခပေးခံနေရတာဖြစ်တယ်။ တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး သံကောင်းဟစ်
ပြီး ပြည်သူကဘဲ သူတို့ကိုဖိနှိပ်တဲ့သူတွေကို အလုပ်အကျွေးပြန်ပြုနေရတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကတော့နိုင်
အဲဒီလို ပြည်သူ့အကျိုးကိုရှေ့တန်းမတင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဘာဒီမိုကရေစီလဲ? လို့မေးစရာဖြစ်နေပြီ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံမှာအလိမ်ခံနေရတဲ့လယ်သမားတွေနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှရှိကြောင်းကို
စစ်တပ် ပဓါန ဝါဒ
Posted by tarzan88 at 06:110comments | Read more...
မြန်မာပြည်ကို ၁၉၆၂ မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆုတ်ယုတ်မှု
ယူအဆနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အာဇာနည်တွေကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာ တိုင်းပြည်ကို
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးစစ်တပ်ပဓါနဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့တဆက်တည်းပါဘဲ။ လွတ်လပ်
ရေးရပြီးကတည်းက မကောင်းတဲ့ သန္ဓေ တည်မှုနဲ့စခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အစစ်အမှန် တိုးတက်ရေးလ
မ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက် အရှိန်ယူနေဆဲဘဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ အဲဒီလိုတိုးတက်မှုဘက်ကို
သွားနေတဲ့အချိန်မှာ၊ မြန်မာပြည်သားတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့၊ မှန်ကန်တဲ့အယူအဆကိုတဦးချင်းစီ
ဒါပေမယ့်၊ ယနေ့လောလောဆယ်ကာလအထိမြန်မာ ပြည်ကိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတ
င်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည်သမိုင်းကြောင်းမှာ၊ အတုယူစရာအစိုးရတရပ်မရှိခဲ့သေးသည့်အပေါ်မှာ၊ တို
ပေးရမယ့်အစား၊ ပြည်သူတွေ၏ဘဝများ၊ ယခင်ကထက်ဆိုးဝါးအောင်နဲ့၊ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွါးထ
ဆောင်နေဆဲဘဲဆိုတာ၊ လယ်ယာမြေတွေကိုအဓမ္မသိမ်းယူနေမှုတွေက ညွှန်းဆိုနေတယ်။
စစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆို၊ ယခင်ကထက် ၅ % လျော့ကျသွားတယ်ဆိုပေမယ့်၊ တိုင်းပြည်
နဲ့ပြည်သူတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ကျန်းမာရေးပညာရေးတွေမှာတော့ အဆပေါင်းများစွာန
ည်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယှဉ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၊ စစ်ရေးအတွက် ၂၁ % (US$ 2.4 bil
lion) ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၁.၈ % (US$7/person/year) ဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ၊ တချို့လူေ
မေရိကန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး၊ အမေရိကန်က စစ်အသုံးစရိတ်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈၀၃ ဘီလီယံသုံး
နေချိန်မှာ၊ မြန်မာက ကျပ် ဘီလီယံ ၆၀၀ သာသုံးနေတယ်ဆိုပြီး၊ လှည်ဖျားပြောဆိုနေတာတွေတွေ့ရတ
ယ်။ အဲဒီလိုအမေရိကန်နဲ့ယှဉ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ အမေရိကန်က သူ့ရဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ကို တိုင်းပြည်တ
ခုလုံးအသုံးစရိတ်ရဲ့ ၁၉ % သာရှိပြီး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၂၃ % သုံးမှာဖြစ်တယ်။ ဒါတောင်အမေရိကန်
ကတကမ္ဘာလုံးမှာသူ့ရဲ့တပ်တွေဖြန့်ထားတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာကစစ်အသုံးစရိတ်မှာ အများ
ကြီးသုံးနေသေးတာ၊ သဘာဝမကျဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒီနေရာမှာဆင်ခြေပေးတာက၊ မြန်မာ့တပ်မတော်
မြန်မာနိုင်ငံဟာ၊ အင်အားကြီး နှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုပ်နဲ့အိန္ဒိယကြားမှာ၊ ကျူးကျော်စစ်တွေဖြစ်လာရင်ပြန်
ပစ်စရာဘာလက်နက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဒီအယူအဆဟာ ဟုတ်သလိုလိုရှိပေမယ့်၊ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ
ဒီနေ့ကာလ၊ ယူနီဖေါင်းချွတ် ပြီး အစိုးရတာဝန်ရှိတွေဆိုပြီးလုပ်နေကြတဲ့သူတွေ၊ စစ်တပ်နဲ့အသွင်ပြော
င်းအာဏာရှင်တွေကို ကျားကန်ပေးထားတဲ့ပါတီကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၊ စစ်တပ်က ထိန်းသိမ်းထားလို့တို
င်းပြည်ရဲ့အချုပ်အချာအာဏာ တည်တန့်နေတာ၊ ဘာညာဆိုပြီး ယခုအချိန်အထိဝါးဒဖြန့်ပြီးပြောဆိုနေ
ကြတုန်းဘဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီအယူအဆဟာ မမှန်ဘူး၊ အာဏာရှင်တစုရဲ့အမှားတွေလုပ်ထားတာကိုဖုန်းကွ
ယ်ဖို့ဘဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကသိထားတယ်ဆိုတာကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမေ့နေကြတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ပတ်
သက်လို့အမှန်တကယ်ဖြစ်နေရမယ့် အခြေအနေက၊ လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်က မြင်းခြံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ခမရ ၁၅ မှ
စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့အုပ်စုတစုက အရပ်သားတယောက်ကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့မှား
တယ်ဆိုတာသိပြီး ခခယယ ပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ၊ အရိုက်ခံရပြီးနှာခေါင်းသွေးထွက်
ယ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့သလို၊ ဘုန်းကြီးတွေကိုသတ်ဖြတ်နှိပ်
စက်ခဲ့သလို၊ လူမျိုးစုတွေကို ၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာ၊ သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခဲ့သလို၊ မကြာသေးခင်ကအထိ
လက်ပတောင်းတောင်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို နှိမ်နင်းခဲ့သလို မျိုးအယူအဆနဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်က
သာလျှင်အဓိကအကျဆုံး၊ ငါတို့စစ်သားတွေသာလျှင် တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဘဲယူ
ဆနေမယ်ဆိုရင်တော့၊ ရှေ့ဆက်ပြီးကောင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့က သိပ်ပြီးမလွယ်ကူလှဘူးလို့မြင်မိ
အမှန်တကယ်တော့၊ လက်နက်အားကိုးတဲ့သူတွေဟာ သူရဲဘောကြောင်ပြီးကြောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်
ကြတယ်ဆိုတာအားလုံးနားလည်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့တွေဟာ Fair Fighting ကိုတော်ရုံနဲ့
လက်မခံတတ်ကြဘူး။ စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုအချိန်မရွေးပြန်သိမ်းယူနိုင်တယ်၊ စစ်တပ်က
တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုလိုအပ်သလိုယူသုံးနိုင်တယ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ စစ်တပ်ဘက်ကလာ
တဲ့သူသာဖြစ်ရမယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်တပ်က ၂၅ % ထားမယ်ဆိုတာတွေဟာ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့မ
တရားမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီအယူအဆကို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေသိသင့်
တယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမှန်တကယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သူရဲဘောကြော
င်တဲ့ လက်နက်၊အုပ်စုအားကိုးပြီးအနိုင်ပိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကို စွန့်လွှတ်ပြီး၊ Fair Fighting လို့
ခေါ်တဲ့၊ တန်းတူရည်တူ တရားမျှမျှတတ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုသာ ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တ
ကယ်တတ်ကျွမ်းနားလည်သော အမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော သူများကသာလျှင် တိုင်းပြည်ကို
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စစ်တပ် ကြီးစိုးရေးဝါဒ
Posted by tarzan88 at 06:130comments | Read more...
တာ အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ပေးလာသောအခြေအနေများအရ၊ အာဏာရှင်တွေကို မဖယ်ရှား
နိုင်သေးပေမယ့်၊ ခြစားလာဘ်စားမှုတွေ ပပျောက်အောင်ပြည်သူတွေအားလုံးလက်တွဲလုပ်နိုင်တယ်လို့
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု့တွေရှိနေတဲ့အခါ၊ အာဏာကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဖေါက်လွဲဖေါက်ပြန် အသုံးချခြ
င်းတွေရှိနေမယ်။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွါးကိုလစ်လျှုရှုပြီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွါးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ
ချမှတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ နှင့်ပတ်သက်သောဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု့များကိုအားနည်းစေ
ပြီး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပျက်ပြားစေပြီး၊ ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်ထောက်ခံမှု များလျော့နည်းစေတ
ယ်။ ဈေးနှုံး၊ အရည်အသွေး၊ တီထွင်ကြံဆမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ မျှတတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်အ
ခြေခံရမယ့်အစား၊ အပြိုင်အဆိုင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေ
ဟာ ကုန်သွယ်မှု့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေပြီး၊ နိုင်ငံတကာရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေ
မှုရရှိ ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာတိမ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်နေပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်လက်တည်ရှိမှုကိုခြိမ်းခြောက်မှု
တွေရှိလာတယ်။ လာဘ်စားမှုတွေတိုးပွါးလာစဉ်မှာ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာပိုပြီးလျှို့ဝှက်တတ်လာပြီး၊ အ
ခြေခံအကျဆုံးလူမှု့ရေး၊ စီးပွါးရေးအခွင့်အရေးများဟာ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံလာရတယ်။ တဆက်တည်းမှာ
ဘဲ သန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေအတွက်၊ ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းဆိုတာကိုပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ ခြစားလာဘ်စားတဲ့နိုင်ငံ ၁၇၆ နိုင်ငံရှိသည့်အထဲမှာအမှတ်စဉ် ၁၇၂ မှာရှိနေ
တယ်။ ဒီလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ ကြားမှာ အောက်ဆုံးအဆင့်နားမှာဘဲရှိနေတာဟာ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လာ
စားမှု့တွေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ ယနေ့ကာလအခြေအနေများအရ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝေ
တွဟာ၊ ယ္ခင်ကနဲ့ ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝတွေဆိုလျှင် ပိုဆိုးလာတာ
တွေကို တွေ့နေရတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးလိမ့်မှာက
ဒီလိုအခြေအနေတွေ ကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ အချိန်ကာလတခုကို ဖြတ်ကျော်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဘဲဖြစ်သ
ည်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့သဘောအရ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကိုရှေ့ဆက်ဖို့ရန်၊ အတော်လေးခက်ခဲနေတာကိုတွေ့ရမည်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုေ
တော့၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွင် မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေသော အခြေအနေများကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုမပြင်နိုင်ခြင်း၊ ပြင်ရန်အတွက် လမ်းစကိုပင်မဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း။ ဒီမို
ကရေစီနည်းကျကျ၊ မျှမျှတတ ရှိသောရွေးကောက်ပွဲမရှိခဲ့ခြင်း ကြောင့်၊ ပြည်သူများ အစစ်အမှန်တင်ေ
မြာက်သောပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ အုပ်ချုပ်ရေးနေရာများတွင်မရှိဘဲ၊ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်များကသာ
အဓိကအချက်အချာကျသောနေရာများကိုရယူထားခြင်း။ ခြစားလာဘ်စားမှုပြသနာများကို ပြတ်သားစွာ
အရေးယူ မှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းများသည် လက်တွေ့ကျသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်များ သည်တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခအပေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သာ
လျှင် အခရာကျသည်ဟုဆိုပြီး အာဏာရှိတာကိုအလွဲသုံးစားပြုလျက် ရနိုင်သမျှသောစီးပွါးရေးလုပ်ငန်း
များကို အတင်းအဓမ္မ လက်ဝါးကြီးအုပ်လုပ်ဆောင်လာပြီးနောက်၊ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း အာ
ဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ သန်းကြွယ်သဌေးတွေဖြစ်သွားကြပြီး၊ စစ်အုပ်စုပြုလုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်
ပွဲမတိုင်ခင်လေးအထိ၊ ခွဲတမ်းတွေ ခွဲဝေယူခဲ့ကြတာကို အမှတ်ရမိပါသေးသည်။ အဲဒါအပြင် ၁၉၉၇-၂၀၀၁
ခုနှစ်များအတွင်း သဘာဓါတ်ငွေ့မှရတဲ့ငွေများသည် စာရင်းပြောက်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့၊ နို
င်ငံတကာသို့ပေးရမယ့်အကြွေးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ ကို စစ်အာဏာရှင်တွေအသုံးချခဲ့
တယ်။ ကျိန်းသေတာကတော့ ပြည်သူကိုဖိနှိပ်ဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊
ပြည်သူအကျိုးအတွက် အသုံးမပြုခဲ့တာတော့ကျိန်းသေတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှု
တွေလုပ်ပြတဲ့အပေါ်မှာ၊ ဂျပန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံ မြန်မာကပေးရမယ့်အကြွေးတွေကိုခ
ဝါချပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နော်ဝေ က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃၄ သန်း၊ ပြီးတော့တောင်ကိုးရီးယားက
လည်း သူ့ကိုပေးရမယ့်အကြွေးတွေကိုမယူတော့ဘူးဆိုတော့၊ အားလုံးစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆
ပြီးတော့ဦးပိုင်လီမိတက် ဆိုပြီး တိုင်းပြည်ကိုလှည့်စားခဲ့တာဟာလည်း ဒီနေ့အထိမရှင်းမလင်းဘဲဆိုတာ
အားလုံးအသိပါဘဲ။ အဲဒီဦးပိုင်မှာ ဝမ်ပေါင်က $ 1 Billion ထည့်ပြီး စစ်တပ်က ရှယ်ယာတွေနဲ့လုပ်ကြတဲ့
နေရာမှာ၊ အကျိုးအမြတ်ကို၊ ပါဝင်လုပ်ကိုင်တဲ့ သုံးဖွဲ့ (စစ်အစိုးရ၊ ဝမ်ပေါင် နဲ့ ဦးပိုင်) ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ
စုစုပေါင်း ၄၃.၉ ရာခိုင်နှုံး သာစာရင်းထဲမှာရှိပြီး၊ ၅၆.၁ % သောအမြတ်ငွေတွေက ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ
ဆိုတာမည်သူမျှမသိပေ။ ပြီးတော့လက်ပတောင်းတောင်မှာ သိမ်းထားတဲ့လယ်မြေတွေအတွက် လျော်ေ
ပြီးတော့၊ လယ်မြေတွေသိမ်းယူနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ၊ လယ်သမားတွေဘက်ကိုလုံးဝ ထည့်မတွက်ဘဲ တဦး
တယောက်ရဲ့အကျိုး၊ အုပ်စုတခုရဲ့အကျိုးအတွက်အဆင်ပြေလျှင် ပြီးရောဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်မှု့မျိုးနဲ့လုပ်
နေခြင်းဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နဲ့ဘာမှမထူးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့အဲဒီလို ပြည်သူ
တွေအပေါ်မတရားလုပ်ဆောင်ခြင်းတွေရှိတာကို၊ အထက်ကိုတိုင်ကြားပေမယ့်လည်း၊ ဘာအရေးယူမှုမှ
ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံဟာ ယခင်ကလိုဘဲ ဘာမှမထူးခြားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခြင်းဟာ၊ ခြစားလာဘ်စားမှု့
ပြုလုပ်ထားတဲ့သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ အပစ်ပေးခြင်းမလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဆိုတဲ့အေ
ကြာင်းရင်းတခုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့လွှတ်ေ
တော်မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မီတီဆိုပြီးဖွဲ့ပေးလိုက်တာကိုလည်း မှတ်သားမိပါသ
ည်။ ဒါပေမယ့်လည်း၊ ဒီအဖွဲ့ဟာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လောင်းရိပ်မိနေ မယ့်ပုံေ
အဲဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လာဘ်စားမှု့တွေကို တိုက်ဖျက်သလို၊ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုပ်ကြ
မယ်ဆိုရင်၊ မြန်မာနိုင်ငံကလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု့တွေကို လျော့နည်းသွားအောင် နဲ့အဲဒီ အယူအဆတွေ
ကိုပပျောက်အောင်လုပ်နိုင်လိမ်မယ်လို့ယုံကြည်သည်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ (Whistle-blower) လို့
ခေါ်တဲ့ လာဘ်စားတဲ့သူတွေကိုသိနေ တဲ့ သတင်းထုတ်ဖေါ်သူတွေဟာ အဓိကကျတယ်လို့သတ်မှတ်ကြ
တယ်။ ထိုနည်းတူစွာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုယ်တိုင်သိနေလို့ထုတ်ဖေါ်ပြောပြပေးမယ့်သူတွေအများ
ကြီးလိုအပ်နေတယ် လို့ထင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပြောပြပေးတဲ့သူတွေရှိလာမှ ပြည်သူတွေသိခွင့်ရမယ်၊ တ
ဆက်တည်းမှာဘဲ ပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ရဲ့သတင်းတွေဟာပြည်သူ
တွေကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတာ သိလာရင် သူတို့အတွက်နယ်ကျဉ်းသွားမယ်။ နောင်လုပ် လာနိုင်
တဲ့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကို ဟန့်တားနိုင်မယ်။ ရှိပြီးသားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကိုအရေးယူခြင်း
တဆက်တည်းမှာဘဲ၊ အဲဒီလိုထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုမယ့်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်၊ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုကြမယ့်သူတွေပိုများလာမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပါ ပုံစံလေးထဲမှာမိမိတို့သိထားသော မည်သည့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိုမဆို
ဖေါ်ပြပေးပါရန် မြန်မာပြည်နှင့်မြန်မာပြည်သူများ၏အကျိုးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
အထက်ပါဇယားတွင်ပေါ်လာအောင်အတွက် အောက်ပါ ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပါ။ -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Loading...
“ဤ" ကတော့ "ကျွဲ" ဘဲဖြစ်နေ ဦးမှာပါ
Posted by tarzan88 at 18:370comments | Read more...
ကျနဲ့ပြုလုပ်နေဆဲဘဲဆိုတာ သိကြသူတွေရှိသလို.. သိသိကြီးနှင့်ခံနေကြသူများလည်းမြောက်များစွာရှိနေ
တကာသိအောင် လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းက၊ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစတင်အကော
င်အထည်ဖေါ်တာဖြစ်တယ်။ ဒါရဲ့နောက်ကွယ်က အတွေးအခေါ်ကတော့၊ တချိန်က ရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်
ဟိန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားတခုရှိတယ်။ ကျော်ဟိန်း နာမည်ကြီးနေရာမှ လူသစ် လူငယ်သရုပ်ဆောင်တွေ နေရာ
ဝင်ယူလာတဲ့အချိန်မှာကျော်ဟိန်းနာမယ်ကျလာတယ်။ အဲဒီတော့ ကျော်ဟိန်းအနေနဲ့ သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးခြင်း
ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်အောင်အတွက်၊ လူသစ်တန်းတွေ နဲ့ရင်ဘောင်တန်းလုပ်ဆောင် ဖို့အတွက်ပြည်သူ
တွေကို နှိုးဆော်လိုက်တဲ့စကားတခုကတော့"မင်းတို့အကြိုက်လုပ်ပြမယ်" ဆိုတာပါဘဲ။
ယနေ့ မြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်တွေလည်း ရာစုနှစ်တဝက်နီးနီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုကို လူလည်ကျတဲ့ သမရိုးကျလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာ၊ ရှေ့ဆက်ရန်အခက်အခဲတွေကြုံလာတာကြောင့်၊ဖြစ်
ပေါ်လာသောအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမီဒီယာ ကိုမီဒီယာဖြင့်တိုက်မည်၊ ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပြော
နေသည့် ဒီမိုကရေစီနှင့် အသံထွက်တူပြီး အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲသော စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကို အကော
င်အထည်ဖေါ်တာဟာ၊ ကျော်ဟိန်းပြောသလို စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့"မင်းတို့အကြိုက် လုပ်ပြမယ်" ဆိုတာနှ
အဲဒီလိုအတွေးအခေါ်နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်သစ်တွေဟာခရီးဆက် လာခဲ့ရာမှာ၊ မြန်မာပြည်
မှာ၊ ပါလီမန်ရှိတယ်ဆိုတာရယ်၊ အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေရယ်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိ
တယ်ဆိုတာတွေရယ်၊ တိုင်းရင်းသားနဲ့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ် တ
ယ်၊ ပြီးတော့ အမေရိကန်နဲ့အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု့တွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊အကုန်လုံး စစ်အာ
ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေကို အတွင်းကျကျကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့...ပါလီမန်ထဲမှာ ပြည်သူကမရွေးချယ်ဘဲ
စစ်တပ်ကအတင်းထိုးထည့်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၂၅ ရာခိုင်နှုံး နဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်စေ
ဖို့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မယ့်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မတရားမှုတွေနဲ့အနိုင်ရလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ၆၀ ရာခိုင်နှုံး
ဆိုတော့၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေကို၊ ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် မည်သည့်တင်ပြချက်မ
ဆိုဟာကျဆုံးနေမှာဘဲ။ အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့်၊ အများစုသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး မကြာသေးခင်က ဘလောဂ်ရေးသူဒေါက်တာဆိတ်ဖွါးကိုဖမ်းဆီးဖို့အ
တွက်လွှတ်တော်မှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့အဆင့်အထိလုပ်ကြတာဟာသမရိုးကျတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ အ
တိုက်အခံအင်အားစုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်၊ ဘယ်သူတဦးတယောက်
ကမှအစစ်အမှန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအဖြင့်မသတ်မှတ်ကြဘူး။ အဲဒါအပြင် ကချင်ကိုတိုက်နေခြင်း
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ၊ ၎င်းတို့ဖြစ်စေချင်သည့်အရာများကိုသာ အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်နေ
တယ်ဆိုတာ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များကသက်သေပြနေတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအဖြင့်၊ ယခုလောလောဆ
ယ်မှာ လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုတော့မယ့် စစ်အသုံးစရိတ် ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်နိုင်ပါသည်။ စစ်တပ်ဟာ
ယခင်လိုဘဲစစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကို တိုင်းပြည်တခုလုံးအသုံးစရိတ်တွေထက် အများဆုံးရအောင်ပြုလုပ်
လျက်ရှိနေဆဲဘဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတွက် စစ်အသုံးစရိတ် ကိုတိုင်းပြည်တခုလုံး
ဘက်ဂျက် ရဲ့ ငါးပုံ တပုံ(၂၀.၈၆ % - ကျပ်သန်းပေါင်း တသန်းခြောက်သောင်းကျော်- US$ 1.15 billion)
ဆိုတဲ့ပမာဏကိုရရှိမယ်။ အကြေအလည်ဆွေးနွေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့၊ ဟန်ပြလောက်သာလွှတ်တော်
ပညာရေးအတွက် ၄.၄ ရာခိုင်နှုံး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၃.၉ ရာခိုင်နှုံး သုံးစွဲမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်အသုံးစရိ
တ်ကိုပြန်ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ပြည်သူတွေဘဝတွေဟာ၊ သိပ်ပြီးအထွေအထူးကြီးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆို
တဲ့အဖြေကိုဘဲရောက်ပြီး၊ စစ်တပ်ကြီးစိုးမှု့က၊ လျော့နည်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရ
မယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ကိုလိုအပ်သလောက် အကန့်အသတ်မရှိ လွှတ်တော်အ
ဒီလိုမျိုးတွေမရှိတော့အောင် လုပ်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်း ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်
နိုင်တယ်ဆိုမှ ဤ ကို ဤ လို့ဖတ်လို့ရနိုင်တော့မှာပါ။
Posted by tarzan88 at 20:220comments | Read more...
Posted by tarzan88 at 18:080comments | Read more...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားနေတယ် လို့ဆိုလို့မရတဲ့အချိန်မှာ
တာဝန်သိပြည်သူတယောက်အနေနဲ့၊ တိုင်းပြည်အတွက်မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်မလာအောင် ယုံကြည်ချက်
နဲ့ထောက်ပြပြောဆိုမှု့ပြုတာဟာ ဘေးထိုင်ဘုပြောတာ မဟုတ်ဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စနစ်ထဲမှာ မိမိပါဝင်ရ
ခရိုနီဆိုတာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးတော့မဟုတ်ပါ။ ခရိုနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် အရ၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့
ဆက်စပ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး၊ လာဘ်ပေးလာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ တိုင်းပြည်ဖရိုဖရဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အာဏာရှင်တွေ ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ အချိန်
မှာ၊ ပြည်သူကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာ
တဲ့အချိန်မှာ၊ ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလွတ် ဆိုတဲ့အတိုင်း၊ ဥပဒေ ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရဖို့ ရှိနေပါသေး
အဲဒီကာလကို မရောက်သေးချိန်မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ ကိုယ်
လိုရာဆွဲတွေးပြီး၊ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့၊ တိုင်းပြည်နာမယ်၊ ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မြဲရောက်နေလိ
မ္မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒီလိုမပြတ်မသားတဲ့ကာလအတွင်းမှာ၊ တရားမဝင်ငွေတွေနဲ့၊ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူ
ထု ဆီက မတရားခေါင်းပုံဖြတ်ထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့သူတွေဟာ၊ အဲဒီအကျိုးဆက်ကို
အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ တရားဝင်ပါတီအဖြစ်ရောက်ရှိအောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်၊ တချိန်မှာတန်
ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်တဲ့၊ တရားမဝင် ခရိုနီတွေ ပေးလာမယ့် ပိုက်ဆံတွေနဲ့ကင်းဝေးတာ
ခရိုနီတွေပေးတာကိုမယူရဘူးဆိုလျှင်၊ မင်းတို့ကကောဘယ်လောက်ပေးနိုင်လို့လဲဆိုတာကတော့၊ ဒီ
မိုကရေစီနဲ့လွဲခြော်နေပြီလို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုသဘောထားပေးတာဟာ ဘေးထိုင်ဘုပြောတာလဲ
မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကို၊ ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်တဲ့ပါတီအဖြင့်ရှုမြင်ပြီးတော့
ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွါးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားမှာကိုမလိုလားလို့ တင်ပြပြောဆိုခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေ
လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မီတီ
Posted by tarzan88 at 19:140comments | Read more...
မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဖြစ်ရောက်ရှိရန်၊ အခြေခံကနေပြောင်းလဲမှု တွေလုပ်ရမယ့်ကိစ္စများစွာရှိ
သည့်အနက်၊ ရိုးရာအစဉ်အလာလိုဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြစ်တွယ်နေတဲ့ ခြစားလာဘ်စားမှုတွေကို ပ
ပြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ခြင်းဟာလည်း၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ၊ ယခင်နှစ်ပေါင်း
များစွာ ကတည်းက ရှိနေခဲ့တဲ့လိုအပ်ချက်တခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်မယ်၊ ခြစားလာဘ်စားမှုတွေကို ထုံးတမ်းအစဉ်အလာလို အောက်ခြေမှ
အထက်ပိုင်းအထိလုပ်ဆောင်နေခြင်းတွေ မရှိတော့အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုအစစ်အ
ယခုလောလောဆယ်မှာဘဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ ခြစားလာဘ်စားတဲ့နိုင်ငံ ၁၇၆ နိုင်ငံရှိသည့်အထဲမှာ
အမှတ်စဉ် ၁၇၂ မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့၊ တော်တော်ကြီးကိုရုပ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်။ ဒါတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်
စနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ကတည်းက တည်ရှိလာတော့၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူးလို့သတ်မှတ်လို့
ရတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တိုင်းပြည်ကိုလုပ်ချင်သလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ခြေတပ်များရဲ့ပံ့ပိုး
ထောက်ခံမှုတွေလိုအပ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ အောက်ခြေတွေကို လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်တွေပေးရတယ်။ အေ
ာက်ခြေက တပ်မှူးတွေက လည်း အထက်က စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်း ၎င်းတို့ကိုယ်တို
င်အတုခိုး လုပ်ဆောင်လာကြတဲ့အခါ၊ မြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကို စတင်ခဲ့တာ
ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ၊ အညှာအတာကင်းမဲ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့မြန်မာတွေဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးဆိုတာ
ထက်၊ ငါနဲ့ငါ့ရဲ့မိသားစု၊ ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေကောင်းစားဖို့က ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောမည်သ
ည့်အရာကိစ္စ မဆိုဟာ သာမည ကိစ္စတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တော့တယ်။
ထင်ရှားတဲ့သာဓကအဖြင့်၊ ကျက်သရေယုတ်အောင် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ ဦး
ပိုင် ကုမ္ပဏီ ရဲ့လုပ်ဆောင်ထားတာတွေကို၊ ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ၊ တတိုင်းပြ
ည်လုံးအသိပါ။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့အပေါင်းအပါတွေဟာ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့အစိုးရဆိုပြီး တဇာဇာ ဟစ်ကြွေး
ပြီး၊ ပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုပေမယ့်၊ လက်တွေ့အရ အကောင်အထည်ဖေါ်မှု နည်းပါးခြင်းအပေါ် ပြည်သူ
တွေ ၄င်းတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုနည်းပါးတာဟာသဘာဝကျလှပါသည်။ တဖက်ကနေကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆို
လျှင်၊ ဦးသိန်းစိန်နဲ့အပေါင်းအပါတွေဟာ မရိုးမသားနဲ့ အချိန်ကာလတခုကိုဖြတ်ကျော်နေကြတာလို့မြင်
ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အပါအဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ယူနီဖေါင်းချွတ်တွေ တိုင်းပြည်အတွက်၊တို
လို့ရတာတွေအများကြီးရှိသလို၊ ပြည်သူတွေကလည်း ၄င်းတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်မှုတွေရှိ
လာတဲ့အပေါ်နားလည်ပေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်တဖြင့်လဲ၊ ဦးသိန်းစိန်နဲ့အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ
၄င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကိုတောင် မဖေါ်ပြရဲကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ သိသာထင်ရှားစွာဘဲ၊ ၄င်းတို့အနေနဲ့ပွင့်
လင်းမြင်သာတဲ့အစိုးရဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုပေမယ့်၊ ပြည်သူတွေသိခွင့်သိထိုက်တာကို မလုပ်ပြနိုင်
ခြင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို၊ လှည့်စားနေတာဘဲဖြစ်တယ်။
ယခုဖွဲ့လိုက်တဲ့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မီတီ ဆိုတာ ရှိသင့်တာကြာပြီ။ အခုမှဖွဲ့တယ်ဆို
ပေမယ့်လည်း၊ ဒီလိုကော်မီတီမျိုးရှိလာတဲ့အပေါ် အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှိသဘောအရသာဖွဲ့ပေး
လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့၊ ဘာမှထူးခြားမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ စည်းစနစ်တကျနဲ့ တင်းတင်း
ကြပ်ကြပ်လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်၊ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိနေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့က၊ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆော
င်နေဖို့ ဝန်မလေးဘူးဆိုတာ တထစ်ချပြောနိုင်ပါတယ်။ အပြစ်ပေးအရေးယူသင့်သူကို အပြစ်ပေးခြင်း၊ ချီး
မြှောက်သင့်သူကိုချီးမြှောင့်ခြင်း နဲ့အတူ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့၊ မည်သူမဆို ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူ့
၈၈ စိတ်ဓါတ် မှ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးဆီသို့
Posted by tarzan88 at 05:340comments | Read more...
၈.၈.၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့သူ တိုင်း ၈ လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်ကို အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာကတော့ နိုင်ငံကိုကြီးပွါး
တိုးတက်စေခြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြေဖျောက်၍ မရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။ ၂၄ နှစ်ကြာ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပြ
ည်သူ့အရေးတော်ပုံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်၊ ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုပေမယ့်၊ ဖြစ်သ
၈၈ နဲ့အတူ အနစ်နာခံမှုတွေ၊ စွန့်လွတ်မှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးရမှုတွေ၊ မိသားစုနဲ့ပြန်မဆုံရခြင်းတွေ စတဲ့ပေးဆပ်
မှုတွေဟာ၊ မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံတခုဖြစ်စေလိုတာမှတပါး၊ အခြားဘာရည်
ရွယ်ချက်မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ၊ ကာယကံရှင်တွေ အားလုံးသိကြသလို၊ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးလည်းသိတဲ့ကိစ္စ
တခုပါ။ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးသလောက်၊ အချိုးအစားညီမျှသော ပြန်လည်ရရှိမှုကို မြန်မာပြည်မှာ ရရှိခံစားနေရတာ
ဂျပန်တွေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ စစ်ရှုံးပြီးတော့၊ ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေ၊ ဆုံးရှုံးခြင်း ငတ်မွတ်ခဲ့ခြင်းတွေ
ကိုအခြေပြုလျှက်၊ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ခံယူချက် ပြင်းပြစွာနဲ့၊ ဥရောပ နဲ့အမေရိက တို့ကနေသ
င်ယူလာတဲ့နည်းပညာတွေကို၊ ပြန်လည်မွန်းမံ တီထွင်ခြင်းတွေနဲ့၊ အလျှင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာ
အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကို မြန်မာပြည်အနေနဲ့အတုယူစေခြင်တယ်။ ဒါပေမယ့်၊ အခြေခံနဲ့ပေးလာတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကတော့မတူဘူးပေါ့။ အဓိကအချက်ကတော့ (transparency) လို့ခေါ်တဲ့ပွင့်လ
င်းညင်သာမှုအပေါ်မှာများစွာမူတည်နေတယ်။ ဟန်လုပ်ပြီးပြောင်းလဲ လို့ကတော့၊ သင့်တော်တဲ့တန်ပြန်သ
သမာသမတ်ကျသော၊ ရှုထောင့်ကနေရှုမြင်ခြင်း အားဖြင့် မြန်မာပြည်ကိုရှုမြင်ကြည့်မယ်ဆိုလျှင်၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့
စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နဲ့ ဟန်ပြ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် ကိုသာလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၊ မြန်မာပြည်ကို
တိုးတက်သော၊ နိုင်ငံတခုဖြစ်လာအောင် မတွန်းပို့နိုင်လောက်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ တိုင်းပြည်ကိုအမှန်
တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်တယ်ဆိုရင်၊ အနစ်နာခံမှုတွေ၊ ဆက်စပ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်။ အဲဒီ လိုအပ်တဲ့
အနစ်နာခံမှုတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ မြန်မာပြည်ကို ယခင်ကလို မွဲတေနေတဲ့အဆင့်မှာဘဲ ရှိနေစေခြင်
တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ပြသလိုဖြစ်မှာပါ။ မေးစရာရှိလာတာက ဘာကြောင့် ၂၀၀၈
ဒီနေရာမှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ ပထမအပိုင်းက၊ ဒေါ်စုတို့ပြောသလို၊ ၈၈ မျိုးဆက်
ခေါင်းဆောင်တွေပြောသလို၊ ၈၈ နဲ့အတူဆုံးရှုံးခဲ့မှု့တွေကို အားပြုပြီး၊ အားလုံးညီညီ ညာညာဝိုင်ဝန်းလုပ်
ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ သန္ဓေ တည်ခြင်းကို၊ လိုအပ်သလောက်မလုပ်နိုင်ခဲ့သေးခြင်း ဆိုတဲ့အချက်ဟာ လုပ်
ဆောင်ခဲ့သူအားလုံးလည်းမြင်ကြတဲ့အချက်တခုပါ။ ဒီလိုအပ်ချက်ကိုမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခါ၊ အခွင့်သာ
သလိုနေလို့ရတဲ့၊ ခြစားနေတဲ့၊ အာဏာရှင်တွေချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ ယန္တရားကြီးဟာလည်း
တွန်းရွှေ့မယ့်သူ မရှိသကဲ့သို့၊ မူလနေရာမှာဘဲဆက်ရှိနေရတာလို့မြင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုသာ အဓိကထားပြီး၊ အခြားသောအရာတွေအားလုံးဟာသာမညဖြစ်တယ်
ဆိုတဲ့ အခြေခံသဘောထားနဲ့၊ လုံလောက်သော တွန်းအားစိုက်ထုတ်မှုကို၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက်
များနှင့်ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးဟန်ချက်ညီစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလျှင်၊ မြန်မာပြည်ကို တိုးတက်မှု့ဘက်ကိုဦးတ
Posted by tarzan88 at 17:560comments | Read more...
မကြာသေးခင်ကဘဲ ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်မှာ၊ ဒီမိုကရေ
စီဘက်ကိုပြောင်းလဲနေပါပြီဆိုပြီး ကမ္ဘာတလွှား ကွက်ကြို ကွက်ကြား မရဲတရဲ ချီးမွန်းနေကြတာတွေကြား
အစစ်အမှန် အပြောင်းအလဲဟုတ်မဟုတ်ကို မသုံးသတ်နိုင်သေးခင်မှာ၊ ညင်သာတဲ့ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ်
ကမ္ဘာမှာ စံနမူနာယူလောက်သော အာဏာရှင်စနစ် မှ ဒီမိုကရေစီသို့ကူးပြောင်းခြင်း ပုံသဏ္ဍန် ကိုဖေါ်ထု
တ်လိုတာကြောင့်၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဦးတည်ပြီး၊ အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့ မြန်
အပြောင်းအလဲတွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ၊ မြန်မာပြည်မှာ ယခင်ကနဲ့မတူတာတွေ အများကြီးတွေ့ရတာကို
တော့မငြင်းလိုပါ။ ဦးသိန်းစိန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံချိတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့တာကနေစပြီး
မြစ်ဆုံဆည် ကို ရပ်ဆိုင်းတယ်၊ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် အနစ်နာခံပြီးလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကိုနောက်ယေ
ာင်ခံလိုက်ခြင်း ထောက်လှန်းခြင်းတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မလုပ်တော့ဘူး၊ သတင်းသမားတွေ လွတ်လပ်
စွာသတင်းယူခွင့်ရနေကြတယ် (censor တွေတော့ရှိနေဆဲဘဲ)၊ ဆန္ဒပြခွင့်ကို လက်တလုံးခြား လှည့်ပတ်ပြီး
ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်၊ စတဲ့စတဲ့ ပွင့်လင်းထင်သာမှုမရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့၊ မြန်မာပြည်မှာလုပ်ဆောင်
လက်ကိုင်ပြုပြီး၊ နိုင်ငံတကာကိုရော၊ ပြည်တွင်းကိုပါ၊ ဝါဒဖြန့်လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာ၊ မြန်မာ့အရေးကိုလုပ်ေ
ဆာင်နေသူ အတော်များများရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ
ရယ်၊ ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ထဲဝင်လာသူတွေရဲ့ သဘောထားတွေမပြောင်းလဲတာတွေရယ်ကိုကြ
ည့်ရင်၊ မြန်မာပြည်ဟာ အချိန်မရွေး နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ရနိုင်တယ်။ ယခင်ကလဲ နိုင်ငံတကာရဲ့ေ
ပြာဆိုမှုတွေကို ဂရုမစိုက်ခဲ့သလို အပြုအမူမျိုးရှိခဲ့တာကြောင့်၊ ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုအခြေခံပြီးနောက်
ကြောင်းပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ပြောဆိုရှုံ့ချမှုတွေကို လစ်လျှုရှုဖို့ရာ အာဏာရှင်တွေအနေ
ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုတွေ သာလျှင်ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီေ
ပြာင်းလဲမှုတွေတောင်၊ ပြည်သူတွေအတွက်အာမခံချက်မပေးနိုင်သေးတာကိုတွေ့ရမယ်။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း
တွေ အားလုံးကို ယခင်ကလိုဘဲ ၎င်းတို့နဲ့ ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးနေသောသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘဲထားထားခြင်း
ဟာ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲက တခုဖြစ်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အပြောအရ၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ
မှာအလုပ် သွားလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကို၊ မြန်မာပြည် ကိုပြန်ခေါ်ပြီး မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွ
က်၊ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြစေခြင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာလည်း၊ လက်တွေ့မှာ အလုပ်တွေမရှိဘဲနဲ့၊ သင့်တင့်
လျောက်ပတ်တဲ့ လုပ်ခကြေးငွေတွေကို မရနိုင်ဘဲနဲ့၊ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထ
မြန်မာပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအသေအခြာ ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိ
ရှိ၊ စည်းစနစ်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြဖို့ရာ၊ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ အဓိကပြသနာကေ
တာ့၊ စစ်အစိုးရ ဆိုသူများက၊ ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထား၊ ထင်မြင်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို၊ မှားနေ
သည့်တိုင်အောင်၊ ၎င်းတို့လုပ်တာမှန်သည်၊ ဆိုသည့် ကမ္ဘာထဲမှ မထွက်ဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့အ ရေခွံကိုခြုံ
ပြလိုက်ပြီး၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ပြသနာများကို၊ ဟန်ဆောင်ဖြေရှင်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ ယူနီေ
ဖါင်းချွတ်တွေ (သို့) ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ အပြောအဆိုတွေကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ၎င်းတို့အနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်၊ အကောင်အအထည်ဖေါ်နေတယ်ဆိုတာ
သိသာတယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ၊ အကောင်အထည်ပေါ်လာသလိုဖြစ်နေ
အတိုက်အခံတွေဘက်ကတော့၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၊ တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်ေ
အာင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရအောင်လုပ်ဆော
င်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ/မရှိ ကိုတော့ လောလောဆယ်နဲ့၊ ဒီလွှတ်တေ
ာ်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့တွေ့ရှိရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ
က ၎င်းတို့ကျူးလွန်ထားခဲ့သမျှကို အရေးယူမခံရစေဖို့၊ ဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ အကုန်လုံးထည့်သွင်းရေးဆွဲထား
ပြီးသားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ၊ ဒီ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ခံကတုတ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကိုအစွမ်းကုန်
ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ သဘာဝကျလှပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ယခုလက်ရှိလွှတ်တော်သက်တမ်းကုန်မယ့်၊ ၂၀၁၅ ကိုမျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း၊ ကိုယ်လိုရာဆွဲ
ကူးကြည့်လို့ရပေမယ့်၊ လက်တွေ့သဘောမှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေအလွန်နည်းတယ်ဆိုတာ ယနေ့ရှိပြီးသားအ
ခြေအနေတွေကညွှန်းဆိုနေတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့
အခြေအနေအရဘဲ၊ တရားသည်၊ မတရားသည်ကို လစ်လျှူရှုပြီး၊ အောက်လမ်းနည်းနဲ့အနိုင်ရအောင်လုပ်
သွားမယ်ဆိုရင်လည်း၊ အတိုက်အခံတွေဘက်က ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
မြန်မာပြည်မှာ အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲမှုဘက်ကိုဦးတည်ဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့အောက်ခြေတွေကိုအရင်
ဦးစွာ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်၊ မြန်မာပြည်မှာ ရိုးရာဓလေ့လိုဖြစ်နေတဲ့ ခြစားလဒ်စားမှုတွေကို တိုက်
ဖျက်ပစ်နိုင်မယ်။ တိုင်းပြည်အကျိုး၊ အများပြည်သူအကျိုးထက် မိမိကိုယ်ကျိုးကိုသာကြည့်နေရတဲ့လုပ်ရိုးလု
ပ်စဉ်တွေကိုပယ်ဖျက်နိုင်မယ်။ အခွင့်သင့်စွာဘဲ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချု
ပ်ရေးဆိုင်ရာနည်းဥပဒေတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဆိုတော့ ပြည်သူတွေတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုထ
ားတယ်။ အဲဒီလိုအမှန်တကယ်ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့လျှို့ဝှက်မဲပေးပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုလျှင်၊ ယခင် ခြစားလဒ်စား
နေတဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင်ပံ့ပိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အ
မှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်သူတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုမင်းကို
နိုင်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များကို၊ အခြေခံအကျဆုံးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်း
(ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ၈၈ ခေါင်းဆောင်များကို အလေးအနက်အကြံပေးခြင်တာက အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ပါ။)
(ပြည်သူကရွေးချယ်နိုင်တော့မည့်ရပ်ကျေး နည်းဥပဒေပေါ်ထွက်လာ - http://burmese.dvb.no/archives/27902 )
အာဏာရှင်တွေဟာ ထင်တာထက်ပိုပြီး လိမ္မာ ပါးနပ်ကြတယ်
Posted by tarzan88 at 14:310comments | Read more...
Dictators are supposed to be dumb, or at least crazy. Muammar al-Qaddafi wasaranting lunatic withagoofy fashion sense. Kim Jong Il hadaweird hairstyle andapenchant for surreal sloganeering. Those generals in Burma were brutes given to consulting soothsayers on major decisions and shooting people at the drop ofahat. Full Story
နဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့စည်းစိမ်တွေကို ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ အာဏာကို တည်မြဲနေအောင်လုပ်
တာဟာ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်သာလျှင်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော၊ ကမ္ဘာကဘာဘဲပြောပြောဂရု
မစိုက်ဘဲ၊ ၎င်းတို့လုပ်ခြင်တာတွေကို၊ မရရအောင်အကောင်အထည်ဖေါ်တယ်၊ ၎င်းတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ပြည်သူကို
လစ်ဗျား အာဏာရှင် ကဒါဖီ ရဲ့ နိုင်ငံတကာသိအောင် ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမှာ ၎င်းရဲ့လူမ
ဆန် ရက်စက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ၎င်းရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့အပြစ်
ပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ မြောက်ကိုးရီးယားအာဏာရှင် ကင်ဂျုံအီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ၎င်းရဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်
ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ကိုစုတ်ပြတ်နေအောင်လုပ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်နေတဲ့မြန်မာပြည်က
အာဏာရှင်တွေရော ဘယ်ရောက်နေကြသလဲ။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ သူတို့အတွက် နောက်
တဆင့် ဖြစ်သင့်တာဟာဘာလဲ။ အဖြေမရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့အများကြီးဘဲ။
မြန်မာပြည်ကအာဏာရှင်တွေရော အထက်ကဆောင်းပါးရှင် CHRISTIAN CARYL ပြောသလို ငတုံးငအတွေ
ဖြစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် တကယ်ဘဲလိမ္မာပါးနပ်ကြသလားဆိုတာကတော့ ပြောရတာအတော်ခက်လိမ့်မယ်။ ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘော
ထားပြီး၊ နှိပ်စက်လိုရသမျှနည်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်၊ ဦးနှောက်
မရှိတဲ့ ငတုံးငအတွေလို့ပြောလို့ရပေမယ့်၊ အကွက်ကျကျ နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ ကျုးလွန်ထားတဲ့ရာ
ဇဝတ်မှုတွေအတွက် ဒဏ်ခတ်ခြင်းမခံရအောင်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို၊ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံပြလိုက်တာက
တော့၊ တော်တော်လေးလိမ္မာပါးနပ်တယ်လို့ပြောမလား၊ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ တဖက်ကမ်းခပ်အောင်တော်
ဖွက်လိုက်ရုံနဲ့၊ ယခင်က ၎င်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော၊ နည်းမျိုးစုံမတရားမှုများကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဘယ်သူ
မှအာမခံချက်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ အတွင်းထဲမှာရှိနေ
ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမခံရသ၍၊ ဆက်လက်ပြီးဒုက္ခပေးမြဲပေးနေလိမ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။
ဗြိတိန်ပါလီမန်အဆောက်အဦးအပြင်ဘက်နံရံ ကားနဲ့ဝင်တိုက်သူကို ဖမ်းဆီး
ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာထဲက မြန်မာ (၁၀ သြဂုတ် ၂၀၁၈)
Burma's Unfinished Revolution
Zawgyi Font | Keyboard | Dictionary | Online Bookshelf | Burmese News etc.
Burmese-English-Burmese online DictionaryBamakye Kunyet Bookshelf
Burma Revolutionary Literature
DVB Live Station
ဧပြီ(၁) ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ တရားမျှတမယ်လို့၊ ထင်ပါသလား?
BURMA REBUFFS CHINA BY Bertil Lintner Burmese change aplenty but it's only skin deep by bertil lintner Prisoners' Release Key to Future by larry jagan POWER STRUGGLE DELAYS PRISONER RELEASE BY LARRY JAGAN
© Copyright 2011 • TARZAN88 • Design by Ngejunk